Author: Mautilar Gushicage
Qofna laguma takoori karo midabka, diinta, dhalashada, jinsiga genderjinsiyadda, hantida, fikradda uu aaminsan yahay, siyaasadda, afka iyo isirka.
Xubinnimada Maxkamadda Dastuuriga punland lagu waayi karaa marka ay sugnaato mid ka mid ah sababaha hoos ku qoran:. Inay ogolaadaan misaaniyad-sannadeedka ama miisaaniyad ku celini ay xukuumaddu horkeento.
Xukumaddu waxa ay gobol kasta u magacaabeysaa Guddoomiye Gobol. Warbixinta xisaab-xirka Pungland la soo dhaafay oo uu Hantidhowrka Guud ogolaaday waxaa horgeynaya Golaha Wakiillada Wasiirka Maaliyadda ugu dambeyn 30ka Juun, taasoo dood kadib Goluhu ogolaanayo ama diidayo.
Sharciga ayaa xadidaya aagagga doorashooyinka ee Golaha Wakiillada iyo Golayaasha Degmooyinka. Maxkamadda Sare waxay yeelanaysaa laba 2 garsoore oo kayd ah oo uu Guddoomiyaha Maxkamaddu u yeeri karo in uu dacwadda la galo, marka garsoorayaasha qaarkood fasax galaan ama garsoore si gaar ah uga cudurdaarto inuu wax ka galo qaadista dacwadaha qaarkood.
Maxkamadda Dastuuriga ahi waxay awood u leedahay inay buriso sharci kasta, xeer hoosaad ama xeer-fulineed Golaha Fulinta gebi ahaan ama qaybo ka mid ah, sababo la xiriira inuu Dastuurka khilaafsan yahay. Haddii xeerkaas la diido, wuxuu noqonayaa waxba kama jiraan, hase yeeshee hawlihii lagu fuliyay xeerkaas wuxuu noqonayaa ansax, haddii aan maxkamadda u aqoonsan mid Dastuurka ka soo 22012.
Dawladdu waa in ay daryeeshaa shaqaalaha jir ahaan iyo damiir ahaanba. Isu dheelitiridda awoodaha Dawladda: U bandhigidda Golaha Xukuumadda talooyinka ku aaddan mashruuc sharci oo khuseeya Xuquuqda Aadanaha. Ku- Xigeennada Garyaqaanka Guud. Madaxweyne Ku-Xigeenku wuxuu qabtaa xilalka maamulka ee Madaxweynaha marka uu dalka ka maqan yahay, ama uusan si ku meelgaar ah xilkiisa u gudan karin.
Haddii ay dhacdo xaaladda ku xusan faqradda 4aad ee qodobkan, Golaha Wakiilladu waxa uu 30 maalmood gudahood ku soo dooranayaa Madaxweyne ku-xigeen cusub. Ciidamada Nabadgelyadu waxay u xilsaaran yihiin sugidda amniga gudaha iyo xuduudaha Dawladda Puntland, waxayna ka kooban yihiin:.
Qofna ma burin karo, ma badali karo, ma diidi karo in uu u hogaansamo xukun maxkamadeed, haddii aysan xukunkaas badalin ama tirtirin Maxkamad ka sarreysa. The 6’2 forward was selected with the first pick of the second round 13th overall and is the first Somali to be drafted in the WNBA.
Horumarinta iyo baahinta waxbarashadu waa waajib saaran Dawladda. Faafreeb horudhac ahi waa reebban yahay. Haddii jago-garsoore ama ka badani ka bannaanaato Maxkamadda Dastuuriga, sabab kasta ha ku timaadee, waa in lagu buuxiyaa afartan iyo shan 45 maalmood gudahood.
Xubintii muddadaas lagu soo magacaabi waayo halkeedii waa ay bannanaanaysaa ilaa laga soo magacaabayo. Eedaysanuhu waxa uu xaq u leeyahay in uu qareen difaaca qabsado. Xorriyadda wax soo saarku way bannaan tahay, waxaase shardi u ah in wax soo saarayaashu ay oofiyaan shuruudaha sharci iyo maamul ee dalka u degsan. Madaxa xafiiska Hantidhawrka Guud waxaa magacaabaya Golaha Xukuumadda muddo shan 5 sano ah, waxaana xilka lagaga qaadi karaa sababo sharciga ku cad oo kaliya.
Haddii dalka ay la soo gudboonaadaan xaalado dagaal, aafooyin dabiici ah, gadood, cudurro faafa iyo xasilloonidarro dalka qalalaase gelisa, dammaanadaha ku cad qodobbada 13, 15, 20, 21, 22, iyo 23 si ku meelgaar ah waa loo laali karaa.
Guddigu wuxuu soo jeedinayaa talobixin uu Goluhu ka doodayo, dabadeedna uu ku ansaxiyo hal dheeri.
Qaab-dhismeedka iyo habraacyada Xafiiska Hantidhawrka Guud Sharci gaar ah ayaa qeexaya. Maxkamaddu waa in ay u fasirtaa eedeysanaha dambiga lagu ciqaabay.
Wuxuu Isimada Puntland ee meesha fadhiyey si qayaxan ugu sheegay in tani aysan ahayn hawl u taal isimada. Xeer gaar ah ayaa nidaaminaya qaab-dhismeedka Xafiiska Garyaqaanka Guud iyuo Shuruudaha looga baahan yahay hawlwadeenadiisa.
Shaqaaluhu waxa ay xaq u leeyihiin in ay cabashadooda ku muujiyaan bannaanbax ama shaqo-joojin si xeerka waafaqsan. Hawlwadeennada dawladda isma sharrixi karaan haddi aanay iska casilin xilalka ay hayaan. Awoodaha Dawladda Puntland ay ku wareejin doonto dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo xuquuqaha ay yeelanayso Puntland, waxa ay ku imaanayaan wada xaajood iyo heshiis dhexmara Dawladda Federaalka iyo Dawladda Puntland, laguna qeexi doono Dastuurka Federaalka ee Soomaaliya. Final jury selection in Punttland piracy case delayed – AP.
Habka codaynta Goluhu waa gacan taag marka laga reebo arrimaha dastuurku si gaar ah u tilmaamo.
In ay caddeyn ka bixiyaan khilaafaadka diiniga ah ee abuurma. Oggolaanshaha xeerka ku dhawaaqidda xaaladda degdegga ah, ayna nuxurkeeda ku wargeliyaan Golaha Wakiillada. Sannad-Maaliyadeedka Puntland wuxuu bilawdaa 1da bisha Jannaayo, wuxuuna dhammaadaa 31ka Disembar ee isla sannadkaas. Xarunta Maxkamadda Dastuurka waa caasimadda Puntland.